Bahrain: Olona iray no namoy ny ainy nandritra ny fanafihana nataon’ny mpitandro ny filaminana tamin’ny andro vao mangiran-dratsy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Febroary 2011 5:14 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, македонски, English
Ampahany amin'ny tatitra manokana mikasika ny Hetsi-panoheran'i Bahrain 2011 ity lahatsoratra ity.
VAOVAO FARANY (4:27am ora any Bahrain ): vao naheno vaovao izahay hoe nisy olona fanindroany namoy ny ainy nandritra ny fanafihana tampoka.
Ireto avy ny vaovao voahangona hatramin'izay tao amin'ny Twitter:
@emile_hokayem: Araka ny voatatitra vao eo dia olona iray no maty ary olona maherin'ny 200 no naratra ka nampidirina any amin'ny toeram-pitsaboana
@chanadbh: VAOVAO MISONGADINA: Manamafy ny mpanao gazety @MazenMahdi fa olona iray no maty ary olona 200 no naratra tao #Bahrain. Manafika ireo mpanao hetsika tao amin'ny Ron-point Lulu ny mpitandro ny filaminana #Feb14
@maryamalkhawaja: Ety an-dalana ho eny amin'ny toeram-pitsaboana aho izao hijery ireo olona naratra
@emoodz: NANAMAFY tamin'ny #bbc i Ibrahim Sharif tao #lulu, tonga dia namely anay izy ireo nefa tsy mba nampitandrina akory #bahrain #feb14
@salehnass: Mijery ny zava-miseho any ivelan'ny lavarangany avy ireo olona amin'ireo trano avobe ao Lulu. Mino aho fa nivarahontsana toa ahy koa izy ireo. #bahrain
@BaghdadBrian: Moa tatitra tsy voamarina ve no henonay milaza hoe olona iray farafahakeliny no namoy ny ainy tamin'ny fifandonana tao amin'ny faritr'i #lulu #avy any amin'i Bahrain??
@maryamalkhawaja: Vaovao mikasika famoizana ain'olona sy olona naratra maro, ho hohamafisiko izany rehefa voamariko
@BaghdadBrian: Nahita ny rahavaviko aho. Tonga namonjy ny rahalahinareo ny olona rehetra @ martyr square. Nahitana zaza amam-behivavy teny. Naheno hiakiaka izahay raha nirehitra ny trano lay
@ahmedalsairafi: Henonay na aiza na aiza ny feon'anjombon'ireo fiara #feb14 #bahrain
@hadeelalsh: #Nanao toy ny saka sy voalavo ireo mpanohitra tao Bahrain niafina ireo mpitandro ny filaminana . Nanempotra ny setroky ny baomba mandatsa-dranomaso, heno ny feom-basin'ireo mpitifitra matihanina #feb14
@JustAmira: Hoy ry kapohy: RT @bahrainlove: @JustAmira @acarvin @hhusaini Tsy feona basy nirefotra iny fa feon-javatra kely nipoaka ka tsy misy tokony atahorana… (cont) http://deck.ly/~1slDQ
@emoodz: Mety hihalefy ny fampiasana ny aterineto any #bahrain, tokony ho vonoina ireo mpanely tsaho izay miparitaka na aiza na aiza.. mba ampitapitao any ny hafatray azafady indrindra.. Fianakaviana maro no notafihana #lulu #feb14
@Sarahngb: Tweets mitatitra fa mihetsika izao ny tafika, miaraka amin'ny fiara mifono vy, ary ny fiara tsy mataho-dàlana mirongo fiadiana. #bahrain
@Sarahngb: Mihevitra ianareo fa moramora ny niainanay izany satria avotra soa aman-tsara izahay, fa tsy izany mihitsy 🙁 Mivavaka ho anareo rehetra aho. #Bahrain
@moftasa: Mihevitra ireo mpanao didy jadona fa hizarazara ny sain'izao tontolo izao ka tsy hiasa saina amin'ny zavatra ataon-dry zareo aty Bahrain sy Libya amin'izao fotoana izao ny olona.